Fitsidihana An’i Belize | Tany sy Mponina
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ourdou Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
TANY SY MPONINA | BELIZE
Fitsidihana An’i Belize
FIRENENA kely i Belize, nefa maro isan-karazany ny zavatra mahafinaritra any. Misy ala mikitroka any, ary manga manopy maitso ny ranomasina, sady misy nosy kely be dia be eny akaikin’ny morontsiraka. Vao santionany fotsiny anefa ireo.
Karazam-biby sy vorona an-jatony no misy any Belize. Anisan’izany ny tokà, ilay vorona manana vava mareva-doko. Ao koa ny tapir, biby lava orona iray tarika amin’ny tokantandroka, izay tena mahery mandeha na an-tanety na anaty rano! Hita any Belize koa ny jagoara, ary any no misy ny toeram-piarovana jagoara voalohany indrindra eran-tany.
Any Belize no misy ny toeram-piarovana jagoara voalohany eran-tany
Anisan’ny faritanin’ny foko maya i Belize taloha. Tonga ny Espaniola mpanjana-tany tamin’ny taonjato faha-16, nefa mbola tsy resy tanteraka ny Maya. Tonga koa ny Anglisy tatỳ aoriana, ka naka an-keriny an’ilay tany. Lasa zanatany anglisy àry i Belize tamin’ny 1862, ka nantsoina hoe Honduras Britanika. Nahazo fahaleovan-tena ilay firenena tamin’ny 1981.
Misy foko isan-karazany any Belize. Anisan’ny tompon-tany voalohany ny Kreôla, Indianina tatsinanana, Garifuna, Maya, ary Mestizo (metisy espaniola sy maya). Sariaka sy mahalala fomba ny olona any. Rehefa miresaka amin’ny olon-dehibe ny ankizy, dia matetika no manao hoe “Madama” na “Ramose”, sady miteny hoe “tompoko.”
Tsena ao amin’ny Tanànan’i Belize
Misy fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah maro any Belize, amin’ny teny anglisy, tenim-paritra alemà, espaniola, kreôla, maya (mopán), sinoa mandarin, ary Tenin’ny Tanana Amerikanina. Olona 1 ao anatin’ny 40 no nanatrika ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy, tamin’ny 2013.
FANTATRAO VE? Maherin’ny 290 kilaometatra ny haran-dranomasina any Belize. Ampahan’ilay haran-dranomasina faharoa eran-tany izy io. Ny Haran-dranomasina Lehibe any Aostralia no lava indrindra eran-tany.
Misy ampahan’ilay haran-dranomasina faharoa eran-tany any Belize
Mponina: 333 000
Fitondram-panjakana: Miankina amin’ny antenimiera
Fiteny: Anglisy, espaniola, kreôla
Toetany: Mafana sy be orana
Vohon-tany: Be tendrombohitra any afovoan-tany, sady misy ala mikitroka sy heniheny. An-jatony ny nosy sy nosikely any amoron-tsiraka, izay ahitana hazo honko maniry any anaty rano
Hizara Hizara Fitsidihana An’i Belize
g 10/14 p. 10-11